Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l1012 zom
Zoma 07 Des.
Vakio ny toko «Ny lalàn’Andriamanitra tsy azo ovana» ao amin’ny boky HM, tt. 447-464.
«Tian’Andriamanitra ny hahatsapantsika fa manana zo Izy eo amin’ny saina, aina, ny vantana ary ny fanahy – mbamin’izay rehetra ananantsika. Isika no famoronany sady fanavotany. Amin’ny maha-Mpamorona antsika Azy, dia mitaky ny fanompoantsika Azy tanteraka Izy. Amin’ny maha-Mpanavotra antsika Azy, dia mitaky fitiavana sy zo avy amintsika Izy – dia fitiavana tsy manan-tsahala... Ny tenantsika, ny fanahintsika, ny fiainantsika dia samy Azy avokoa, ary tsy vitan’ny hoe satria fanomezana maimaimpoana avy aminy fotsiny izy ireny, fa indrindra satria mandrotsaka amintsika mandrakariva ny soa avy aminy Izy, no sady manome antsika hery ampisaintsika ho fitaovana ho antsika...» - GAG, t. 245.
«Hoy koa Jehovah: ‘Raha miaro ny tongotrao amin’ny Sabata hianao, ka tsy manao izay tianao amin’ny androko masina, ary manao ny Sabata ho fahafinaretana, ary ny nohamasin’i Jehovah hoe Mendrika Hohajaina... dia hiravoravo amin’i Jehovah hianao.’ - Isa. 58 :13,14. Ho fahafinaretana ny Sabata ho an’izay rehetra mandray azy ho famantarana ny herin’i Kristy mamorona sy manavotra. Mahita an’i Kristy ao amin’ny Sabata izy ka mifaly ao Aminy. Manondro azy ny asan’ny famoronana ho porofo mazava ny heriny lehibe eo amin’ny fanavotana ny Sabata. Mamerina ao an-tsainy ny fiadanana very tany Edena izany, nefa milaza koa ny fiadanana tafaverina amin’ny alalan’ny Mpamonjy. Ary ny zavatra rehetra eo amin’ny zavaboary dia samy mamerina ny antso manao hoe: ‘Mankanesa aty Amiko hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavestra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana.’ - Mat. 11:28» - IFM, t. 300.
1. Toy izao no voalaza ao amin’ny Jer. 31:33: «Fa izao no fanekena ataoko amin’ny taranak’Isiraely; rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah, dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony; ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko.» Ampiasain’ny olona sasany io andininy io mba hanehoany fa ny lalàna (na indrindra ny Sabata andro fahafito) dia efa nofoanana tamin’ny fanekena vaovao. Inona no diso amin’io fomba fiheverana io? Raha ny marina, vao mainka manamafy ny toerana misy ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito mahakasika ny làlana, ka anisan’izany ny Sabata, io andininy io. Amin’ny fomba ahoana?
2. Koa satria inoantsika fa tokony hotandremana ny lalàna – ao anatin’izany ny Sabata – nahoana isika no tsy maintsy mitandrina mba tsy ho latsaka ao amin’ny fandriky ny fanarahan-dalàna fatratra loatra? Resaho eo amin’ny kilasy ny mikasika ny fitandremana be fahatany ny lalàna, sy ny fomba ialana aminy.
3. Saintsaino ny anjara asan’ny lalàna eo amin’ilay ady lehibe. Nahoana i Satana, eo amin’ny fanoherana ataony amin’ny lalàn’ Andriamanitra, no nanao paik’ady manokana ho an’ny didy momba ny Sabata? Nahoana no dia nanao hetsika «marani-tsaina» tahaka ireny izy momba izany?